Tora-pasika italiana mahafinaritra | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika italiana mahafinaritra
Mitenena amin'ny ankapobeny ny Italia lehibe dia ny manonona ireo teny hoe "hatsarana", "paradisa" ary "fitiavana" amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha. I Italia dia iray amin'ireo firenena tiako indrindra: manana toetr'andro mitovy amin'ny Espaniôla izy, manana morontsiraka misy morontsiraka mahafinaritra, manana ny Tuscany taloha izay misy olona te ho very, ary manana ny hakanton'izany tanàna malaza toa an'i Milan, Turin, Sisila., sns.
Saingy androany tsy tonga hiresaka momba ny firenena isika, fa manokana momba ny morontsiraka sasany any morontsiraka italiana. Izahay dia mitondra lisitra iray miaraka amiko izay raha ny fahitako azy no tsara indrindra morontsiraka italiana mahafinaritra. Manantena aho fa tianao ihany koa izy ireo, ary ny iray amin'izy ireo dia ho tonga fialan-tsasatra amoron-dranomasina mety ho anao ato ho ato.
1 Cala Mariolu any Baunei, Sardinia
2 Marina Dell'Isola any Tropea, Calabria
3 Turks tohatra ao Agrigento, Sisila
Cala Mariolu any Baunei, Sardinia
Ao anatin'izany no ahitanao ny vatokilonjy ka hatramin'ny vato sy ny vato latsaka mandro amin'ny rano mangarahara. Ity cove ity dia tsy tokony hialona ny karatra paositry ny morontsiraka Karaiba tropikaly. Cala Mariolu, dia iray amin'ny perila amin'ny Helodranon'i Orosei, miaraka amin'ny halaliny kely, vato mavokely sy fasika ... Tsy isalasalana fa izy no iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Italia.
Ao amin'ny faritanin'i Vibo Valentia ary mitobaka ao amin'ny Morontsirak'i Tyrrhenian mipoitra ity toerana malaza sy tiana amin'ny endriny nofinofy ity. Eo amoron'ny morontsiraka iray be vato, izay manjary mangatsiaka ny rano dia ity morontsiraka mahafinaritra ity. Eo anelanelan'ny "Isola Bella" sy "Playa de la Rotonda"”Hahita fasika sy ranomasina virjina ianao (na saika). Azo antoka fa hahasarika anao ny Marina dell'Isola.
Turks tohatra ao Agrigento, Sisila
Sary avy amin'i Matteo Mignani
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo morontsiraka tokana indrindra eto an-tany izy io. Ity morontsiraka ity dia mamorona a tohatra fotsy voasokitra amin'ny fikaohon-tany amin'ny manga sy maitso ao amin'ny Ranomasina Mediterane. Amin'ireto "dingana" ireto dia ahitantsika olona misasa masoandro milentika, toy ny lounger. Avy amin'izany no ahitanao ny masoandro mody tsara indrindra azo atao. Ny a hatsaran-tarehy voajanahary, mitsiriritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tora-pasika italiana mahafinaritra
Ny valan-javaboary tsara indrindra amin'ny morontsirak'i Espana